Home » Dicas de blogs
09.05.2020 Category: Dicas de blogs
Hapana chinonzwa chinogumbura kupfuura kunzwa sokunge iwe hauna kuwana chinhu pamagumo ezuva rako rekubhura.
Kutarisa pachikwata chakazara netai emhashu kana i uchiongorora maitiro ako ezuva nezuva ekubhururuka.
Nhasi ndinoda kukubatsira kuputsa pfungwa iyo yakaora mwoyo, yakasvibiswa muhupenyu hwakazadzika, hunofadza, hunobereka izvo inotora bhulogi yako kune imwe inotevera.
Ndakatarisa ruoko rwekutanga kuti kubereka kunogona kukurumidza sei kuburitsa kwako kubudirira. Mushure mekugara mune imwe gango rega rega rekuvhara kutya ini ndakafunga nzira yekusimudzira maitiro angu kuwedzera bhugi rangu rekutengesa, kuwedzera zvandinowana mabhurogi uye nekubatsira tani yevanhu mukugadzirisa.
1 Mano sandoris
1.1 Kubudirira kunobereka chizoro chekubwinya kwakanaka kweblogi.
2 „Usavhiringidze Chigadzirwa Nekuita“
3 1- Sarudza Mufambisi Akakodzera
4 2- Shandisa Nguva Kuronga Mafungiro Ako
5 3- Mepu kunze kweZuva Rako
6 4- „Mabasa Ako“ partija
7 5- Kuronga nguva
8 6- Gadzira Mukunyarara
9 7- Dzidzira muShadhi
10 8- „Kurara kwemaawa 8 usiku“
11 9- Zvishandiso
12 10 – Užsakomosios paslaugos
13 11- Kudzidzira
Matipi andiri kuzogovera pazasi akandibatsira:
nyora uye uzviparidze zvinyorwa zveBoxNUMX eBooks
kuparidzira pamusoro pe5 000 tinklaraščio įrašų pamusoro pebasa rangu rokugadzira
kuparidzira mazana evashanyi misoro
panguva yekubvumira kwangu basa.
Kana iwe ukatevera mazano aya mune zvechitendero unogona:
vanoita seve pose kelia
kuwedzera nzira yako yekutengesa, mazita emahofisi ekubhadhara mazita uye zvikwereti
Kubudirira kunobereka chizoro chekubwinya kwakanaka kweblogi.
126 įkandimo knygos „kuAmazon“.
Unogona vanoita seve pose pose pasina kushanda iwe pfupa. Zvinoreva kuti iwe unogona kubudirira paIndaneti uye unonakidzwa chaizvo nezvibereko zvebasa rako rakangwara, rinobudirira.
Asi iwe unofanirwa kuziva kuti ungafamba sei zuva rako kuti uite zvibereko.
Mumwe anotungamirira mukati; zvishandiso hazvingakuiti kuti uite uye iwe pachako. Inoshandisa mudziyo (waka iwe) inosarudza huwandu hwavo hwekubereka nekufamba muzviito zvinobudirira zuva rega rega. Zvimwe zvishandiso zvinogona kuwedzera kukura kwako zvakanaka asi mudzi wezvinhu zvose zvinobudirira zvinobvadantti memafungiro ako.
Tora iyo kubva kune mukomana akanyora uye akazvinyora-akaburitsa 6000 izwi eBook zuva rega rega panguva ye3 mwedzi yakatambanudzwa makore mashoma apfuura. Zvese zvaunoda kuve hyper inobereka inogara mupfungwa dzako, iko zvino. Zviri kwauri kuti usunungure chikara chinobereka.
Tevera mazano aya ekusimudzira kuburitsa kwako kwekuburitsa.
„Usavhiringidze Chigadzirwa Nekuita“
Wana pachena pane muzikyano pakati pekubudirira uye basa. Nhamba yezviito zvakapera hazvirevi chinhu. Kubudirira shure kwekugadzira kwako kunoreva zvose.
„Tarisa“ pfungwa yekuroveraging. Iva nekubudirira kusvika vaizdohu vakawanda vanofarira sezvinobvira.
Usave wakabatikana nekuda kwekubatikana. Usatarisira kune zvimwe zvinangwa zvekubloga kana mhando yako yebasa ikatambura.
Unokunda hapana menduru dzekunyora uye kuburitsa 5 yevaenzi mazuva ese kana iyo mhando yekushambadza isina kunaka. Mes uri nani pane kunyora uye kushambadza 1-2 yakakwirira mhando, yakanangwa, traffic-kutyaira yevashanyi mitezo.
Funga kubudirira pamusoro pevhutu rakachena vaizdas bhero rinobudirira.
1- Sarudza Mufambisi Akakodzera
Vagorggers vanobudirira vanosarudza mutyairi akakodzera.
Tsanangurira chinangwa chako kuti urege kubudisa.
Bhuku rakanyanya ku:
taura iwe pachako
Kusarudza vatyairi vatsva kunokukurudzira kuti uite zvakanaka.
„Ini ndakanyora 100 eBooks“ mumwedzi ye3 nekuti pfungwa dzangu hadzina kukanganiswa nekufunganya nezvekutsvaira imwe e-book kuburikidza nemhirizhonga yekusimudzira. Ini akanyora nokuda kwemufaro wekunyora. Kunyatsodzivirirwa kubva pamigumisiro panguva iyi yekunyora ndakatora eBook zuva rega rew kwemwedzi ye3.
Zviri nyore kugadzira kana usive zive nezvibereko zvekugadzirwa kwako.
tora peni uye pepa
garažas muimba yakanyarara
zvibvunze kuti sei uchibloga
kusunga zvikonzero zveimwe nzira yekuseka uye rusununguko
Kugamuchira chinangwa chakanaka kunokuita iwe unoshamisa zvikuru. Kana iwe uri kugovera mabhogi kuti ufare uye kupararira rudo iwe uchava muchina wekusika.
2- Shandisa Nguva Kuronga Mafungiro Ako
Shandisa minda yekutanga ye30 yezuva nezuva kugadzirisa pfungwa yako.
Kubudirira ndicho chibereko chekusarudza kwaunofunga kufunga uye kunzwa.
"Simba rangu hafu yeawa" pakumuka rinogadzirisa inzwi rezuva. Sezvo nyika yangu yomukati inowedzera nyika yangu yekunze inotevera.
Mumakore akaonda ndakapedza nguva shomanana pakuvandudza munhu. Kuburitsa kwangu kuburitsa kwakanga kusiripo nokuti pfungwa dzangu dzakanga dzichitya nekutya, kushaiwa uye kudedza. Kušanda mupfungwa dzangu zuva rega rega kwakandibatsira kuona, kutarisana, kubvuma uye kusunungura maitiro ekudzivirira akandibata zvakare.
Nokuchenesa pfungwa dzangu ndakava wakasununguka kuti ndiite zvakakwana.
Ndaida kugovera zvishoma skambdaiita zuva nezuva zvandinoita kuti ndikubatsire kuva dinamo inobereka.
Kufungisisa kunowedzera kuziva kwako.
Kugara kwe 5 kusvika kumaminitsi e30 zuva nezuva kunobatsira kutarisana, kubvuma uye kusunungura chero hupi hwekutya kwekutenda kwekutenda iwe unonamatira kune izvo zvakaderera zvaunobereka.
Tsvaga nzvimbo yakanyarara. Zorora muviri wako. Svinura pfungwa dzako.
„Tarisa panel kufema kunopinda mukati nokunze kwemhino dzako“. Apo kunyatsoteerera kwako kunopera kure nemashoko ako okufema chinhu chaunofunga-pfungwa, kunzwa kana chimwe chinhu kunze kwako – uye zvinyatsofambisa pfungwa dzako kudzokera pakufema kwako.
Fungisisa nguva dzose nokuda kwekutuka kwakasimba kwekubhururuka chokwadi serumas. Iwe unogona kupika kuti iwe unoda kuva unobereka zvinoshamisa asi kana zvakanyanyisa-zvaunotenda zvisinganzwisisiki zvinoreva zvimwe zvakashata zvako zvinokunda nguva dzose. Zvichida kusvikira iwe unotya kutya-based, kuvhara sarnasda kunopera. Kufungisisa ndicho chinhu chakakosha chekutora kaipda chero kupi zvayo.
„Ruzivo“: „Rwendo rweKumutswa“: „Bhuku“ redaktorius
Fungidzira uchifunga kuti zuva rako rinopfuurira munzira ipi inobereka.
Tsvaga nzvimbo yakanyarara. Zorora muviri wako nepfungwa. Rega mufananidzo wehuwandu hwekuzvibvunzurudza iwe pachako kuti uone pahwindo pafungwa dzako.
Kuzviona iwe sekubudirira kunowedzera kubudirira kwako nokuti kufunga kwako kunotarisa zvakaitika muupenyu hwako.
Ita mafungidziro emangwanani emaminitsi 5 zuva nezuva kuti uone migumisiro yakanaka.
Ndapota fungai nachiremba wenyu musati maita izvi.
Ita muhomwe yechando inotonhorera pakumuka.
Simudza simba rako. Iva nekubudirira zvikuru.
Kuvandudza hutano, simbisa simba rako uye urambe uchibereka zvibereko mukati mekunetseka kwemazuva mashoma emabasa.
Kubudirira kwangu kwakawedzera nguva yandakatanga kutora mvura inotonhora yezuva nezuva.
Dzorera dial kuti inotonhora. Hora pasi pemvura yekutsvaga jūs 30 kusvika ku60 sekundžių.
Kunyange zvakadaro hauna kugutsikana nehodha yewadha bit? Teerera kune mumwe mudzidzisi akakurumbira wenyika uye nyanzvi yakaisvonaka Tony Robbins anotaura pamusoro pei simba remvura inotonhorera.
3- Mepu kunze kweZuva Rako
Mepu yezuva rako inoita kuti uve nezvibereko nokuti iwe uchaona zvakajeka mabasa ekugadzirisa unofanirwa kupedzisa zuva racho. Hapana mhirizhonga kana chirwere chinoparadza pfungwa dzako mukusava nemhando, mafungiro asina kufanira.
Nyora mabhogi ako mabasa ezuva racho. Chengetedza izvo zvinogadzirwa zvinogadzirwa uye urege kuenda zvisingabatsiri, zviito zvisingaiti.
Nyora zviito zvako zvekugadzira mabhuku pane imwe papepa.
Kushanda mumitambo iyi kunoita kuti mabhogi ako mabasa awedzere kunyanya, achikuita kuti uende kuzvinhu zvinobudirira, zvinobudirira.
nyora 5 kune 10 mari yekubudisa mabhurogi mabasa
funga nezvezviito zvinoshandisa kuvepo kwako semuenzi achitumira
tora runyararo kana iwe ukazviwana uchigadziriswa nemabasa uye usingabatsiri
4- „Mabasa Ako“ partija
Shandisa mablogi ako mabasa kuti uwedzere zvimwe zviri mukati.
„Shanda mumaminetsi emaminetsi e50“. Ipa basa rakananga kune imwe nguva ye50.
Kupera kwemaminitsi e10 pakati pebasa rekushanda.
1-oji 50 paketo minučių – „nyora blog“ „yako inotevera“
2. 50 maminitsi ekugeza – ramba uchinyorera bhokisi rako rinotevera
3-iasis 50 mutara wemaminiti – rondedzera panel 5 populiariausių tinklaraščių kubva munharaunda yako
4-oji 50 mutsara wemaminiti – shingai shamwari nevateveri mumagariro evanhu
5-oji 50 mutsara wemaminiti – nyora muteveri wako gryure
Iva nehasha newaini yako kuti uwedzere kubudirira kwako. Kana nguva yapera uye iwe usati wapedza basa rako raunenge uchida kungoenderera mberi kune rimwe rinotevera uye dzokera kubasa rako rinoshanda zuva rinotevera. Isai muenzaniso wekugadzirahandti memazuva ezvigadziro kuti uwedzere kubereka kwako.
5- Kuronga nguva
Sezvaunowana ruzivo unokwanisa kurongedza mabasa ako ekubloga kuitira kuti uwedzere kubudirira.
Rega kuenda uchinetseka kubhurwa mabasa kuti uwane nzvimbo yekuwedzera mabhurogi mabasa.
„Mutsva“ tinklaraštininkė Inogona kur kas nors imasi, kad „yakakosha panel mamwe mabloggi“ yra socialinė žiniasklaida, kur masažas kuti agovere uye ataure zvemukati zvemukati.
Sezvo nyeredzi yavo ichivhenekera uye vazhinji vanowanikwa mashomanana emashure vanopindadantti, nguva iyoyo ingadai iri nani kunyatsoshandiswa kunyora uye kubudisa vatambi vhesi pamasimba ekublogi kubva kunzvimbo yavo.
Rongedza marongerwo ako ekublogirira kuti uwedzere kubereka kwako. Kuita basa-kupera kwemaitiro. Rega kuenda muchikwata mabhendi. Shandisa nguva yako nesimba rako chete kune zviito zvakabereka, zvinobudirira zvibvumirano zvekubudisa zvinyorwa zvakanyanya.
6- Gadzira Mukunyarara
Gadzira zvinyorwa murunyararo.
Vamwe vanoblogi vanofarira kunyora nemimhanzi vachitamba kumashure. Ndinoda kusika mumunyararo nokuti mimhanzi inonditadzisa uye inovhara kubuda kwezvakanaka mupfungwa dzangu.
Kunyora murunyararo kunogadzirisa unhu hwako hwakawanda nekuti pasina zvipingamupinyi zvinokwira mukati mako mupfungwa dzako unogona kugadzira zvinhu zviri nyore uye nyore.
„Tsvaga imba yakanyarara“. Kana kuti ipai mahwindo maviri-kutinhira mahwindo.
7- Dzidzira muShadhi
„Nyora 500 kumashoko 1000 zuva nezuva kuti uite“.
„Vhura chigwaro cheShoko“. Nyora. Tora chibvumirano gryure mokunge uchinge warova chinangwa chezuva nezuva.
Gara kune tsika iyi kubudisa zvinyorwa nguva dzose.
Zvose zviri kugovera mabhuku pasi pano haugone kuridza chinyakare tsika yekunyora.
rega mazwi ayerere; usamire kugadzirisa
sora chigwaro cheShoko gryure mekurova chinangwa chako kukudziridza tsika yekudzivisa kubva pakunyora kwako
ita zuva rega roga kuti uone zvakanakisisa
sezvo iwe unotarisa kune imwe muenzi kutumira mikana nguva dzose iwe unogona kudzidzira zvishomanana mumumvuri uye nezvimwe panzvimbo yevanhu vose
Rekomenduojama literatūra: Kunyora Kwaungaita 10 000 Mashoko muZuva Rimwechete
8- „Kurara kwemaawa 8 usiku“
Tora maawa mashoma 8 ekurara usiku humwe. Dzokorora bhajiro yako bhabheri.
Kubudirira kunoda kuti iwe ushingairire kurwisa zuva rako rekubhura. Kofi inokutora iwe kusvika ikozvino.
Chenjerera muviri wako kuti uwedzere kutarisana nepamusoro uye pasi pemasikati. Kana iwe uine simba uye uine simba iwe unogona kamba uine zvibereko pasinei nekusangana nezvipingamupinyi zvaunoda kuparadza kana kuvhara
enda kunorara panguva imwe chete usiku
verenga usati warara kurara kunonoka pasi pfungwa dzako
kudedza kudya kwefefeine usati warara kune kurira kweanorara husiku
Rega kuita zvekurovedza muviri usati warara
ndinoshandisa TweetDeck uye Social Oomph kuti urambe uchibereka.
Mano „Tweetdeck“ ekrano kopija.
Chimwe nechimwe chinondibatsira kuti ndive neboka guru revateveri vehupenyu hwemagariro kuburikidza nemuitiro wekugadzirisa.
Nokugadzirisa zvinyorwa zvese unogona kupa nguva yakakwana nesimba kuti ugadzire zvitsva, zvitsva, zvinotarisirwa.
Shandisa midziyo kuti ibudirire. Zvishandiso zvinotarisa matanho, chengetedza nguva yako uye ikubatsire kuti uwane huwandu huwandu hwevanhu vanotarirwa kuburikidza nemitambo yakagadzikana.
Ndinokwanisa kunyora 3 kune vashandi ve 5 zuva nezuva nekuda kwekugadzira mabhurogi nokuti mabhii ari pamusoro apa ari kugovera zvandiri ini 24-7, 365.
10 – Užsakomosios paslaugos
Perduokite „zvinhu zvako“ internetinių dienoraščių kampanijai „kuti urambe uchibereka“.
„Svondo rapera“ tinklaraštis yangu yakaparara kwemaawa anopfuura 24.
„Panzvimbo yekuedza kuziva kuti chii chakakanganisika ndakaendesa tekiti kune davi rekubatsira uye ndakatsanangurira mutekisi webhu yangu kumamiriro ezvinhu.
Ikare ini ndingadai ndakaparara 2 kumaawa e4 ndichiedza kuziva kuti ndingagadzirisa sei mamiriro acho ezvinhu, ndichidya mutenzi anokosha kunyora nguva yekunyora nekuuraya maitiro angu.
Izvo zvitsva ini ndakabudisa dambudziko mumasekondi uye ndakanyorera 3 mishandi yemusi iwoyo zuva.
kana chimwe chezvinhu zveblogiti yako zvakanakisisa zvinoshandiswa nevanyanzvi vane unyanzvi.
Zvibereko zvakanyanya zvinogadzira mablogiki vanoita zvakanyanya uye vanobudisa mabasa ose avasingadi.
Bhara vanhu kuti vaite zvakananga mabhogiji mabasa kuitira kuti iwe upe nguva yako nesimba nesimba rokubudisa mabhuku mabhuku, eBooks, mafundo uye basa.
„KuBuena Vista“, Kosta Rika.
Zvinoshamisa kuti vangani vanobereka, vanoshanda uye vane ruzivo rwekuita zvakanaka runorova rangu bhokisi bhokisi ini ndichiita muviri
kunowedzera unyanzvi hwako
inowedzera kubereka kwako
inovandudza hutano hwako
kunowedzera mufaro wako
Nenguva yakajeka, kudzidzira kwemaminitsi mashoma 30 zuva nezuva kunofambisa kubuda kwemavara nemuviri wako. Sezvo kubuda uku kunowedzera iwe unoparadza zvigadzirwa zvekugadzira, zvichikuita iwe unobereka, wakawanda dynamo.
Pedza 30 maminetsi kurovedza muviri zuva nezuva. Famba, jog, mhanya kana kuita mutambo wako waunofarira. Ingotaura nachiremba wako kana usati warovedza muviri munguva.
Ita sarudzo iyoyo nhasi.
Tevera mazano aya nekushingaira kuti uve chibereko uye kubudirira kuburikidza dinamo.
Nzira Jokuratidza Nesimba Kubatsira Kwako Kuburitsa Mabhurogi
Nzira Yokuratidza Nesimba Kubatsira 콰코 쿠 부리 차 마부로 기
하 파나 chinonzwa chinogumbura kupfuura kunzwa sokunge iwe hauna kuwana chinhu pamagumo ezuva rako
Nzira Yekuita Mari Yakawedzerwa Kubvunzurudza: Nișă Mazano și Nzira
Contents0.1 "Hei Jerry, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Contents0.1 "Hey Jerry、ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 ミエンザニソイェフペニュフウェチョクワディ Heano mamwe emisasa yangu yevaeni
Contents0.1 "Hey Jerry, sei lá mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Contents0.1 "Ei, Džerij, ndingaita sei mari yekugadzira mabhuku sauri?"0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe
Blogger om Dummies: Me pehea te Tīmata i te Blogg Jeg er i 2020
Hoe maak je een kortingssite met WordPress?
Как создать купонный сайт с помощью WordPress?
Google SEO e o caso MyBlogGuest – hora de reverter os papéis!
Nrhiav Qhov Zoo Tshaj tiešsaistes hostings un Kawm Yuav Teem Koj Lub Lag Luam e-pasts
Cum să ceri sponsorizare pe blog când îți este frică
Izplatītas gramatikas kļūdas un kā no tām izvairīties savā emuārā
25 Ручно изабране некретнине ВордПресс теме
5 마타 카이 돈 루 부타 루 부툰 라바 라이 완다 케 가노와
Como encontrar a melhor proteção DDOS para blogs e sites de pequenas empresas
Vai jūsu klientu apkalpošanas dienests apzinās klienta vērtību?
Najbolji jeftini webhosting (ispod $ 5 / maand)
10 maneiras da Net-Technesch, primeiro site do WordPress de WordPress e promoções
1 & 1 Revisão de Hospedagem
Nā Nūhou 7 e hoʻohuli i nā mea heluhelu i ka Blogg i loko o nā uku kūʻai
Memilih Penyedia Perkhidmatan Web Hosting yang Selamat
NO ka nui o nā hoʻohana-meo nā ʻano o VPN: pehea e hiki ai ke hoʻohana me ka VPN
Wywiad z gospodarzem: współzałożyciel Pressidium Hosting, Andrew Georges
5 разлога зашто би играч Сим Цити могао бити ваш сљедећи менаџер друштвених медија
스토리 텔링이 블로깅의 중요한 부분 인 이유
Ēd jūsu āķis: Os mellores Freebies para a xeración de lead
Sukces AccuWebHosting poprzez reakcję klienta
Bochum Weeb 님이 Kachas 님과 함께 2020 년에 있습니다 (Dabere na Real Data & ụnọdụ Ojiji)
Flipping de domeniu: cumpărare și vânzare pentru profit
Cas Pop sensācija Taylor Swift Muaj Qhia Koj Txog Khiav Hauj Lwm Ib Zaug Blog
6 dalykai, kuriuos privalote padaryti, kad savo tinklaraštį paverstumėte verslu
Njia Tatu Rahisi za Kuunda Tovuti : 음 wong 조와 음완 조하 투아-만 완조
Vergelijk Top 3 CMS (2017): WordPress vs. Joomla vs. Drupal
7 taktyk, aby przekonać czytelników blogów do płacenia klientom
Njira Zitatu Zosavuta Kukhazikitsa vietne: Gawo ndi Gawo Woyambira Buku
10-hjørnes av Trovado de Senpaga Skribta Laboro
Медијски сетови и спонзорства: како свој блог учинити атрактивним за оглашиваче
ВордПресс-Дииаарииеиаасха Вебсите-ка уради сам: Ваа Мидкее Ваа Инаад Истицмаалатид?
IX interneto prieglobos apžvalga
11 niezbędnych narzędzi i zasobów do blogowania
첫 온라인 워크샵을 만들어 사이트에서 수익을 창출하는 방법
Kaip pridėti „Google“ kalendorių prie savo „WordPress“ svetainės
Bait Your Hook: Makanan Percuma Terbaik untuk Menjana Prospek
37 Elementen van gebruikersbetrokkenheid – UX, conversies, loyaliteit
Cari Hosting E-mel Terbaik & Ketahui Cara Menyiapkan E-mel Perniagaan Anda
Inceptor Guide: Quid Duis egestas elementum risus? Quid est Domain? Duis egestas elementum risus differentia inter A et domein
Eng yaxshi electronic pochta manzilini toping va biznesingizni qanday qilib o’rnatishingiz mumkin
Vind de beste website-bouwers
Twa Fason Fasil yo kreye yon Sit wèb: Etap-pa-etap Begynner Gid
W3 Tapeke Kaeka Tae – И Туа Ату и Нга Таутухинга Вхануи
Daugybė VPN naudojimo atvejų: kuo gali būti naudingas VPN
영감을주는 15 가지 WordPress 교육 테마
블로그 및 소규모 비즈니스 웹 사이트에 가장 적합한 DDOS 보호 찾기
Virtuālais privātais tīkls (VPN): ļoti detalizēts ceļvedis iesācējiem
Intee Ayuu Yahay Site Ku Deeqaa Qiimaha 2020?
ЛСИ кључне речи могу вам помоћи да ваш садржај буде бржи
De beste gratis webhotellene (2020)
Nazwa domeny dla manekinów: Yadda za a saya sunan yankin
Ar turėtumėte gauti savo domeną iš „Namecheap“ ar „GoDaddy“?
Comparați cele mai bune 5 plugin-uri de backup WordPress